Star Trek Beyond (2016) Star Trek Beyond ဇာတ်ကားကို စဖွင့်တော့ ထုံးစံအတိုင်း Captain Kirk က တစ်ခြားဂြိုလ်တစ်ခုပေါ်မှာ ထိုဂြိုလ်က အကြီးအကဲတွေကို လက်ဆောင်သွားပေးနေတာ။ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး သူပြန်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ သူပေးမဲ့ လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ အရာလေးဟာ သူနဲ ့ပြန်ပါလာခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါ ခရီးစဉ်ကြီးက5နှစ်သက်တမ်း။ အချိန်က3နှစ်ခန် ့တောင် ကျော်လာပြီ။ USS Enterprise က သူတို ့နားခိုလေ့ရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yorktown ကို ရောက်တဲ့အခါ Captain Krik နဲ ့Spock တို ့မှာကိုယ်ပိုင် အနာဂတ်အတွက် စီစဉ်ချမှတ်ထားပြီးသား ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ်စီရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖွင့်ပြောပြဖို ့တော့ အခွင့်အလမ်း မသာခဲ့ဘူး။ Vice Admiral အဖြစ်ရာထူးတိုးဖို ့Captain Kirk တစ်ယောက် ...
IMDB: 7.1/10 217,697 votes
Gods of Egypt (2016) Gods of Egypt ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာAlex Proyas ကရိုက်ပြီး Nikolaj Coster-Waldau (Horus), Gerard Butler(Set), Brenton Thwaites(Bek), Élodie Yung(Hathar) နဲ့ Courtney Eaton(Zaya) တို့အဓိကပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ရှေးခေတ်အီဂျစ်နတ်ဘုရားတွေအကြောင်းကို အခြေခံရိုက်ထားတဲ့ Fantasy အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းလေးတကားဖြစ်ပီးတော့ တခြားတချို့အခွန်ကိစ္စတွေ နဲ့ တချို့အကြောင်းရင်းလေးတွေကြောင့် ဇာတ်ကားကုန်ကျစရိတ်ပြန်ရငွေ အသားတင် သန်း၉၀တိတိရှုံးခဲ့သည့် တိုင်အောင် 37th Golden Raspberry Awards မှာတော့ ဆု၅ဆုထိရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ... ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း Osiris က သူ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသား Horus ကိုသူ့ကိုဆက်ခံမည့်ဘုရင်အဖြစ်ကျင်းပနေသည့် နန်းတက်ပွဲအခမ်းနားကို သူ့ညီ Set ရောက်လာပြီး နန်းလုတဲ့ချိန် Osiris သေရခဲ့ပီး ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး Horus လဲ မျက်လုံးကန်းခဲ့တယ် Set ဘုရင်နေရာသိမ်းပိုက်ပီးနောက် လူသားသေမျိူးတွေအနေနဲ့ နောက်ဘ၀တမလွန်ကိုကူးပြောင်းဖိုဆိုရင် ရွှေကိုဆက်သရမယ်လို့ကြေငြာလိုက်တဲ့နောက် လူသား(သေမျိုး)တွေ အခက်ခဲနဲ့စတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် ဒါတွေကို ပြန်လည်ပီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ ပြန်လည်ရယူနိုင်ဖို့ Horus တယောက်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲ သု့ရဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတယ့် မျက်လုံးကို ရောဘယ်လိုပြန်ယူမလဲဆိုတာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအုန်းဗျနော်.... ဒီဇာတ်ကားလေးကနေပေးခြင်တဲ့ Message လေးက ...
IMDB: 5.4/10 99,411 votes
Housefull3(2016) Housefull3ဇာတ်ကားသည် အိန္ဒိယတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည့် Housefull နှင့် Housefull2ဇာတ်ကားတို့၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Sajid-Farhad က ရိုက်ကူးထားသည်။ Housefull3ဇာတ်ကားသည် ဖခင်တစ်ဦး၏ သမီးသုံးဦးအပေါ်ထားရှိသည့် လွန်ကဲ သည့်မေတ္တာကြောင့် သမီးသုံးယောက်ကို အိမ်ထောင်ဖက်မပေးစားလိုဘဲ ကလေးငယ်များကဲ့ သို့ ရင်ဝယ်သားလိုစောင့်ရှောက်လိုသည့် ဖခင်နှင့် သမီးသုံးယောက်အား ချစ်ကြိုက်နေသည့် အမျိုးသားသုံးယောက်တို့အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းဆင်ရိုက်ကူးထားသော ဘောလိဝုဒ်အချစ် ဟာသဇာတ်မြူးကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအနေဖြင့် ချောမောလှပသည့် သမီးသုံးယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဖခင် တစ်ဦးမှာ သမီးငယ်များအား အိမ်ထောင်ဖက်ပေးစားလိုခြင်းမရှိပေ။ သမီးများ၏ ရည်းစား ဖြစ်သူ အမျိုးသားသုံးယောက်မှာ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ၄င်းတို့၏အိမ်တွင်းသို့ဝင်ရောက်ကာ သမီးများ၏ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည့် သတို့သားများဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြကြရသည်။ နောက်ဆုံးမှာ ဖခင်၏ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် သတို့သားလောင်းများ၏ လိမ်လည်မှုများကို ဟာသနှောကာ ရိုက်ကူးထားသည့် အိန္ဒိိယဘောလိဝုဒ် အချစ်ဟာသဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်သည်။ (Review credit to The Mirror ...
IMDB: 5.0/10 7,414 votes
Allegiant (2016) သိပ္ပံဆန်းကြယ် အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းကား ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေ အတွက် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ.။ Insurgent အဖြစ်အပျက်ကြောင့် တံတိုင်းပြင်ပက အစိုးရဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေလူတွေသိရှိသွားကြတဲ့အခါ Tris နဲ့ Four တို့အဖွဲ့ဟာ Chicago မြို့ကိုစွန့်ခွာပြီး တံတိုင်းပြင်ပကို ထွက်လာကြပါတယ်။ အဲ့အပြင်ရောက်တော့ Chicago မြို့ကို လူတွေထည့်ပြီး နှစ်ရာပေါင်းများစွာ စမ်းသပ်နေခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ လူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်းနဲ့မှ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ လိမ်ညာနေတာတွေ ဖြစ်လာ သိလာကြရတယ်။ အဲအပြင် Chicago မှာလည်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အတွက် Tris ဟာ စွန့်စားပြီး အလွန်ခက်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ Review Credit to-Dat Shin
IMDB: 5.7/10 98,031 votes
Finding Dory (2016) မျက်လုံးလေး ပြူးပြူးနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကြာကြာမခံပဲမေ့တတ်တဲ့ Dory ဟာ တစ်နေ့တော့ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သူ့အဖေနဲ့ အမေကို ပြန်သတိရလာတာကနေသူ့သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Merlinနဲ့ Nemo တို့ရဲ့အကူအညီကို ယူပြီး သူ့မိဘတွေကို ပြန်တွေ့ချင်ဇောနဲ့ ရှာပုံတော်ခရီးဖွင့်ပါတော့တယ်…. ဒီကားဟာ Finding Nemo အပြီး နောင် ဆယ့်သုံးနှစ်ကြာမှထွက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ထွက်လာတော့လည်း Finding Nemo လောက်တော့ဇာတ်လမ်းပိုင်း မကောင်း ထပ်တူကျနေခဲ့ပေမယ့်လည်း Finding Nemo လောက်ကို ခံစားရအောင်လုပ်ပြီး Message တွေ ပေးသွားခဲ့တယ် ငါးပြာလေး ဒိုရီဟာ သူ့မိဘတွေနဲ့ ပြန်တွေ့နိုင်ပါ့မလား သူဒီလောက်မေ့တတ်တာကိုလေ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ဒွိဟအတွေးတွေကို Disneyနဲ့ Pixar ရဲ့ ရေအောက်ကမ္ဘာ အန်နီမေးရှင်းအလန်းကြီးတွေ တစ်ချက်တစ်ချက်ထဖောက်တဲ့ဟာသလေးတွေချစ်စရာ ရယ်စရာကောင်လေးတွေနဲ့ အတူဇာတ်လမ်းအဆုံးထိကို ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ် Ed O’ Neill ရဲ့ ရေဘဝဲကြီး Hank ဇာတ်ကောင်ဟာလည်း Disney ကားတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကောင်အဖြစ်ထည့်ရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့တယ် ...
IMDB: 7.3/10 219,347 votes
The Shallows (2016) [Unicode] ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပက်သက်ပြီး Trailer စကြည့်တုန်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက် ရေလွှာလျှောစီးရင်း ငါးမန်းနဲ့တွေ့တဲ့ဇာတ်ကား ၊ သာမန်ရိုးရိုးဇာတ်ကားလောက်သာထင်ထားခဲ့ပေမဲ့ အခုတကယ်တမ်း ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်ချို့အချက်လေးတွေကိုသတိထားမိပါတယ်။ ငါးမန်းဇာတ်ကားတော်တော်များများကြည့်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ အခု The Shallows ဇာတ်ကားမှာသတိထားမိခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ Cinematography ပါပဲ။ . ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Director က House of Wax ၊ Unknown ၊ Non-Stop စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုုရိုက်ကူးထားတဲ့ Jaume Collet-Serra ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအတွက် Location က ကမ်းခြေတစ်ခုထဲမှာပဲရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲ့ဒီ ကမ်းခြေနဲ့ ရေတွေကိုပဲ Director အနေနဲ့ တော်တော်ကိုလက်စွမ်းပြထားတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေထဲကရိုက်ကွက်တွေအတွက်ပါ။ Surfing လုပ်တဲ့အခါမှာ Closeup Shot တွေတော်တော်ထည့်သုုံးထားတာတွေ့ရတယ်။ ရေတွေကိုလုံးဝအနီးကပ်ပြီးဆွဲလိုက်ပြီး ရေပေါ်နဲ့ ရေအောက်ကိုတစ်ခါတည်းပေါ်အောင်ရိုက်ထားတဲ့အကွက်တွေကိုတော့ ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျပါတယ်။ မသိရင်ပဲ ကိုယ်ရေထဲဆင်းပြီးသူတို့ကိုကြည့်နေရသလိုမျိုးရိုက်ထားတာမျိုးပါ။ . နောက်ပြီးတော့ အပေါ်ကနေ Drone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရိုက်ကွက်တွေလဲမိုက်တယ်။ Storyline ကနဂိုတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေလို့ ...
IMDB: 6.3/10 110,530 votes
Ice Age: Collision Course (2016) Ice age (2016) Finally finally နောက်ဆုံးတော့ ရေခဲခေတ်လေး အဆုံးသတ်ပြီဆိုတော့ Review ရေးရင်းတောင် ၀မ်းနည်းတယ်😢😢😢😢 ထပ်ထွက်ပါအုန်းလို့ဘဲပြောခြင်တော့တယ် ဟွန်းးးးး😭😭😭 2016 ကိုတော့ ထူးထူးခြားခြားကြီးသိပ်ပြောမနေတော့ဘူး ၅ကားမြောက် လဲဖြစ်နောက်ဆုံးကားလဲဖြစ်ဆိုတော့ ice age fan gyi တွေလဲ ဘယ်သူကဘယ်လိုတွေလဲ အချွန်မတက်လဲဆိုတာသိလောက်ရောပေါ့နော် ဒီတစ်ခေါက်တော့ မစ္စတာရှဉ့် အချွန်နဲ့မချက်ကြီးက နဲနဲတော့များသွားတယ် စကြာဝဠာထိကိုကျော်လွန်သွားပြီဆိုတော့ ဗျာ နဲနဲများသွားပြီ သူ့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ကို ဥက္ကာခဲတွေ ကျိူးပဲ့ကျလာတယ် အယ့်ဒါတွေပြောင့် ကမ္ဘာပျက်လုနီးအနေထားကိူရောက်ရှိလာတယ် ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ Ice age မိသားစုကြီးက ဘယ်လိုတွေများလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့ ရပ်သပ်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားပေးပါအုန်းလို့ပြောရင်း... ဘိုင့်ဘိုင့် 😎😎😎😎.....Bonus Truck ၈မိနစ်လေး၂ကားကို အလျင်းသင့်သလို ဘာသာပြန်ပေးမယ်လို့ အာ့လာပြောတာ😎😎😎😎 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... Review by ZunMoe(John) Translated by Mary Mayme